Ejiji Na-enye Obi Ụtọ Na-enweghị Nwee Obi Ụdị | Buddhatrends
Ejiji Na-enye Obi Ụtọ Na-enweghị Nwee Obi Ụdị
Nwere ike 01, 2018
Na-egosiputa ỤLỌ NWA NA-AGBANWE BUDDHA
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị mma, uwe na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị naghị achụrụ uche gị maka ịke, ị nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ejiji na-etinye nrụgide dị ukwuu na ụmụ nwanyị iji rube isi n'iwu ndị ahụ na n'enweghi obi abụọ ọzọ, na nchekasị ahụ na-etinye anyị n'ụlọ mkpọrọ na otu mmadụ ndị yiri ya na akwa uwe. Ọ bụrụ na ị dị njikere ka uwe gị bụrụ ihe ngosi nke àgwà gị, ele anya ọzọ, chọta ike gị n'ime gị ma gosipụta ụdị ịkebeke gị!
Na-ekwu maka uwe, ị nwere ike hapụ onwe gị ma chọpụta onwe gị n'otu oge ahụ n'ọtụtụ dịgasị iche nke ohere gị. Ọtụtụ ihe ị nwere ike ịchọta emechi patchwork,uwe elu-igwe, Uwe ejiji Chinese, Uwe ogbo na ndị ọzọ. Banyere ihe ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ị chọrọ ka akpụkpọ gị nwee ike iku ume, akwa mma, linen, lace na ma eleghị anya ihe niile jikọtara ya na denim. Na agba niile, ọ gaghị ekwe omume ịhọrọ otu mgbe enwere nhọrọ. Ị nwere ike ịhọrọ ihe ọ bụla site na uwe na-achacha acha otu, ịcha mma nke na-acha anwụrụ ọkụ, ịkwanye bohemia, iji mara mmapụta, iji na-agba agba agba, na-efegharị, na-egbuke egbuke, na-enweghị ike agwụ agwụ, nanị ị na-akpọ ya.
Na-aga site na ejiji na n'elu nke na-ekewapụrụ n'ime ole na ole: uwe na uwe elu, sweaters na pullovers, cardigans na kimonos. Ha nyere gị kpuchie isi mmiri oge mmiri ozuzo, oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ, oge mgbụsị akwụkwọ oyi na oge oyi oyi. N'akụkụ a, ị ga-ahụ ihe dị iche iche dị ka owu, linen, ajị, denim ma ọ bụ chiffon na n'ụdị nile dịka eriri olu-n'olu ma ọ bụ V-olu ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ elu ahụ. Enwerekwa ego ziri ezi uwe eluna akwa uwe. Dabere n'ogologo, ị nwere ike eyi ma ọ bụ na-enweghị jeans ma ọ bụ ụzọ abụọ nke nchara n'okpuru n'okpuru ma ọ bụ dabere na oge na ihu igwe. Ị nwekwara ike ịhọrọ ụdị uwe aka gị, uwe ogologo oge ma ọ bụ ịcha aka. Dabere na oge gị, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ụdị ọ bụla ị ga - enwe ike ịnweta, mana ị gaghị emegiderịta onwe gị. Ị nwere ike ịga na nke dị mfe dị ka uwe ejiji acha ma ọ bụ ihe nkiri ma ọ bụ ma ọ bụ cardigan, ma ọ bụ ihe na-emekarị ka ọ bụrụ ụbọchị nkịtị n'ime ogige ahụ; ma ọ bụ polka dot; ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ ihe mgbidi agba nke ga-ewetara gị akwụkwọ edemede dị mma. Ma ọ bụ na ị nwere ike ịhọrọ ihe ọ bụla ọzọ dị iche iche n'echiche nke ịnwale na agba na pụọ ​​na mpaghara nkasi obi gị dị ka ịzụta ụdị ọkpụkpụ nke na-abụghị ihe ọhụrụ ma ọ bụ nke ọma; ihe nwanyi ma na enweghi ihe ndi ozo dika ihe ndi ozo n'adiri nma ma obu ndi ozo; ma ọ bụ na ị nwere ike iji usoro agbụrụ mee ihe na cardigans ndị nwere ike ịgbanwere ma ọ bụ na ị nwere ike iji ejiji akwa akwa na ikpere ikpere na-ese onyinyo nke eserese, ihe na-abụghị nke nkịtị kama ọ bụ nke a. Kedu ihe, ọbụna karịa, ị nwere ike ịhụ ebe a oyi gị dị mkpa kwa, dị ka uwe ajị na nakwa ụfọdụ trendy denim Jaketị.
A na-ekepụkwa ala n'okpuru akụkụ ole na ole: nchara, harem uwe ogologo ọkpa, ihe ndị dị mma, na skirts. Site na ebe ọkwá ahụ ị nwere ike ịhọrọ site na ịkwanye azụ na-ebugharị na-eji obere ego na-arụ ọrụ; karịa prọzzo pants na-egosi na ha nwere ihe ndị na-adịghị mma ma na-adaba n'ime ụkwụ buru ibu site n'úkwù ala; karịa ọkpọ elu nke na-egbuke egbuke nke na-eme ka ọkpụkpụ ahụ na-eme ka ị na-ele anya dị ka slimmer na nke a na-akpọ hourglass figure; ị nwere ike ịchọta uwe ogologo ọkpa nke ga-eme ka anya gị dị ogologo. Ha na-egbuke egbuke, na-eji ụkwụ na-egbuke egbuke n'ụdị nile dịka linen, owu ma ọ bụ corduroy ma daa na ejiji ma ọ bụ vintage-boho na ihe mgbochi ma ọ bụ ihe nchara. Echere na Harem sitere na si n'ebe ọwụwa anyanwụ bụ ezigbo nkọwa nke ọkpọ ụkwụ comfy, baggy, ogologo ma jide na nkwonkwo ụkwụ. Ha dị mma iji eyi, ọchị na ịcha mma. Ị nwere ike ịhọrọ site na ihe karịrị otu edemede nke omenala ọdịda anyanwụ dịka ọdịmma Asia ma ọ bụ dragọn ndị na-ahụ maka Asia. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ịchọrọ ịchọta ihe jupụtara na okooko osisi na àgwà ndị doro anya nke nwere ike jikọta ya na sneakers na uwe elu ma ọ bụ uwe elu. Ngwa igwe na agba a dị iche iche na-echetara anyị na anyị kwesịrị inwe obi ụtọ, nwee obi ụtọ ma nwee obi ụtọ ná ndụ anyị. I nwedịrị ike ịchọta akwa akwa denim harem ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị, nke dị mma na ejiji. Ọ bụrụ na ihe gị dị mfe, karịa na ị nwere ike ịrapara na ụdị monochromatic nke ị na-enweghị ike ịga. Na nke ikpeazụ ma ọ bụghị ihe dị ntakịrị mkpa bụ uwe mwụda nke dị mkpa nke uwe ejiji ndị inyom. Ha na-eji aka ha na-eme ihe dị iche iche na ọtụtụ n'ime ha. Ha dị ka aka e ji aka mee, ya na iche iche nke textures na ihe. Ha nwere ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe. Nke a na ihe ndị ọzọ yiri uwe ndị na-egosipụta ụdị ịkebe pụrụ iche ị nwere ike ịchọta na www.buddhatrends.com.You nwekwara ike ịchọta ihe dị iche iche, oge oyi, ndị na-acha nwa, n'ozuzu uwe na denim. Ndị na-acha oji, na-aga site na ọkpụkpụ palazzo dị iche iche ka ha bụrụ ndị a na-ahazi na ndị oge ochie bụ ndị dị mkpa n'ime uwe ejiji ọ bụla iji mezue ememe gị ma ọ bụ ma eleghị anya ịzụ ahịa. A pụrụ ime nke a site na corduroy ma ọ bụ denim dị elu.
Tags: Ejiri uwe Patchwork,Buddha uwe, Buddha Ejiji,Hippie Uwe, Harem Pants maka Women, Hippie Overalls